चिनियाँ ह्याकरले झोलामा नअटेको पैसा गार्डलाई दिए, पक्राउपछि पनि हँसिलो अनुहार ! – Rhino khabar
Home/अर्थ बजार/चिनियाँ ह्याकरले झोलामा नअटेको पैसा गार्डलाई दिए, पक्राउपछि पनि हँसिलो अनुहार !
शनिबार राति ११ बजे काठमाण्डौको दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको एटीएमबाट अस्वभाविक रुपमा पैसा झिकिएको जानकारी पाएपछि बैंकले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । त्यसपछि महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी नेतृत्वको टोली तत्कालै दरबारमार्गमा पुग्यो ।
विभिन्न बैंकका एटीएमबाट रकम चोरी भएपछि केही बैंकले काठमाण्डौ उपत्यकामा एटीएम बन्द गरेका छन् ।
चिनिया ह्याकरहरुले नक्कली एटिएम कार्ड बनाएर १ करोड भन्दा धेरै रकम झिकेपछि नविल, प्रभुलगायका केही बैंकले एटीएम बन्द गरेका हुन् ।
लुटिएको रकम अझै बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ह्याकरहरुले केही बैंकको सिस्टम नै ह्याक गरेको र केही नक्कली एटीएम बनाएर पैसा झिकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
एटीएम र बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्न अहिले राष्ट्र बैंकमा बैठक बसिरहेको छ ।
ह्याकिङमा संलग्न ५ जना चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, उनीहरुलाई दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी, व्यवसायीले मिति मंगलबार सार्वजनिक गर्ने
आजदेखि सुरु भयो सोह्रश्राद्ध